Tag: kaararka kirismaska ​​| Martech Zone
Tag: kaararka kirismaska
Maxaad Kaadhadhka Ugu Diray Fasaxan
Talaado, Nofeembar 29, 2011 Talaado, Nofeembar 29, 2011 Douglas Karr
Kafaala-qaadayaasheena Zoomerang waxay soo saareen sahan fasax ah waxayna ogaadeen in 63% ka mid ah jawaab bixiyaasha 1,000 ay soo diri doonaan kaararka fasaxa xilliga fasaxa 2011 Xilliga ay qoraallada, twitter-ka, iyo cusbooneysiinta Facebook ay yihiin foomka ugu muhiimsan ee cusbooneysiinta shaqsi ahaaneed ee maalinlaha ah, kaarka fasaxa ayaa weli ah heerka dahabka ee muddada sanadka ee ay dadku higsanayaan in ay dhaqammada sii noolaadaan. Si aad u isticmaasho isbarbardhig fudud: fariimaha warbaahinta bulshada waa kaararka fasaxa oo ah fasax ahaan
Talaado, Juun 3, 2008 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Waxay umuuqataa toddobaad kasta inaan soo dejinayo cusbooneysiin adeeg kale ah oo loogu talagalay Vista. Dhawaanahan, Vista waxay lahayd xirmo adeeg isla maalintaas Apple ay heysay cusbooneysiinteeda 10.5.3 ee OS X Leopard. Tan iyo markii la cusbooneysiiyay Leopard, waxaa igu soo dhacayay tan badan oo arrimo ah anigoo adeegsanaya biraawsar… haddii ay yihiin Safari ama Firefox. Maanta waxaan go'aansaday inaan dib u rakibo Safari si aan u arko haddii aan wax ka qaban karo mar uun iyo dhammaanba. Markii aan bilaabay rakibaadda, waxaan ahaa
OSX Bug: U Yaree Sawirka 16 Terabytes?
Wednesday, April 23, 2008 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Kani waa cayayaan aad u qabow (oo qosol badan) oo aan maanta ku dhacay. Waxaan doonayay inaan cabir kor uqaado sawirka anigoo adeegsanaya horudhac laga soo bilaabo 140px ballaaran ilaa 100px ballaaran. Hordhaca waligiis ma keydin doono markii aan riixo OK. Waxaan u maleynayaa inaan gartay - fiiri Cabirka Natiijada.
Wax Si Xun U Jira Sidan Ayaa Iman Doona…
Talaado, Maarso 11, 2008 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Weligaa ma heshay dareenka ah in wax run ahaantii, runti xun ay dhici doonaan? Screenshot-ka Vista oo ku saabsan inuu ku socdo MacBookPro-ga oo la socda isbarbar dhigaya 3.0 iyo OSX Leopard.
Maxaa kaa Gudbaya?
Arbacada, Oktoobar 24, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Shalay waxaan la qadeeyay saaxiibkeyga wanaagsan, Bill. Markii aan ku cunnay maraqkayagii cajiibka ahaa ee digaagga ee 'Scotty's Brewhouse', aniga iyo Bill waxaan ka wada hadalnay daqiiqaddaas foosha xun ee guuldaradu isu beddelayso guusha. Waxaan u maleynayaa in dadka kartida lihi ay awoodaan inay indha indheeyaan halista oo ay abaalmariyaan oo ay wax u qabtaan si waafaqsan. Waxay ku boodaan fursadda, xitaa haddii halista aan laga gudbi karin… oo badanaa waxay u horseedaa guushooda. Haddii aan ku waayo, igu dheji Waa tan